IHawaii Ibungaze i-Ballistic Missile Alarm Yamanga Nge-Dose Of Porn | Izindaba zamagajethi
IHawaii igubhe i-alarmistic missile alamu yamanga ngomthamo onempilo we-porn
Sibheka emuva futhi sikhumbule ukuthi umbuso wonke wabandakanyeka kanjani empikiswaneni yomhlaba wonke, futhi kungukuthi umuntu ophethe ukulawula futhi Ukugcinwa kwe-Missile Alert Services kwe-Hawaiian hit inkinobho engalungile, okwenza zonke izinhlelo zomsakazo, idatha ephathekayo ngisho nangesistimu yamakheli omphakathi, yakhipha umlayezo wengozi eseduze.
Kodwa-ke, ngemuva kwesiphepho, ukuthula kuhlala kuza njengoba besho. Okuthile okunje kwenzeka eHawaii, futhi yilokho Ngemuva kwemizuzu embalwa yokwethuka, abaseHawaii bagubhe i-alamu yamanga e-ballistic missile ngokuya kumasayithi abo e-porn abawethembile.
Ithimba lezokuxhumana le PornHub, iwebhusayithi eyaziwayo yezocansi eye yabandakanyeka ehlazweni elingaphezu kwelilodwa lokufuna ukwazi ngenxa yothando ebaphatha ngalo abasebenzisi bayo abathembekile, ixhumene nabo Mashable ukuze yabelana ngemininingwane yewebhusayithi yakho ngaphambi, ngesikhathi nangemva kwe-alamu yamanga edumile okwasungula isimo sokwethuka kuso sonke isimo. Imininingwane inelukuluku lokufuna ukusho okuncane, kungenzeka ukulindela ukuwa kwethrafikhi ngenkathi i-alamu yamanga iqinisekiswa, kepha ... kwenzekani ngemuva nje kwalokho?
Ukuwa kwethrafikhi PornHub Kusuka esixwayisweni semininingwane evame ukurekhodwa bekungama-77%, into enomqondo wayo, into ebigcinwa kuze kuqinisekiswe i-alamu yamanga. Noma kunjalo, Ngemuva kwemizuzu engama-38 impela, imigubho ayizange ilinde, kanti iwebhusayithi ithole ithrafikhi engaphezulu ngama-48% kunalokho ebikutholile ezinyangeni ezisanda kwedlula ngasikhathi sinye njengoba sibona kugrafu ehambisana nalesi sihloko. Umthamo omuhle wobumnandi kwakuyindlela engcono kakhulu abantu baseHawaii abakwazi ngayo ukukhipha ukungezwani okuqoqiwe ngaleso sikhathi esingaphezu kwengxenye yehora lokwethuka, akubonakali kuwumqondo omubi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ezocansi nezocansi » IHawaii igubhe i-alarmistic missile alamu yamanga ngomthamo onempilo we-porn
Abakwa-Samsung banelungelo lobunikazi nge-100% yesikrini
I-Google ilungisa inkinga, singabuyekeza i-Chromecast yethu